Ra’iisul Wasaaraha Britain oo ka hadlay Ujeedooyinka shirka Soomaalida uu ugu qabanayo Magaalada London | Anti-Tribalism
← Wefdigii Somaliland Uga Qaybgeli Lahaa Shirka London Oo Qaarkood Fiise Loo Waayay
Jaaliyadaha beesha Hawiye ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika oo digniin culus kasoo saarey hirgalinta Roadmapka iyo heshiisyada Garoowe1 iyo 2 →
Arbaco, Feberaayo 22, 2012 (Moment Media Group) — Iyadoo lagu wado in Khamiista berri ah oo ku 23-ka Feberaayo uu ka furmo magaalada London ee dalka Britain shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa shirkaas ujeedooyinkiisa faahfaahin ka bixiyay ra’iisul wasaaraha Britain, David Cameron oo ah mas’uulka shirka soo agaasimay.
Mr. Cameron oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in shirkan oo hal maalin keliya qaadanaya uu yahay mid lagu doonayo in dunida ay ka shaqeyso sidii xasilloonida Soomaaliya lagu soo celin lahaa.
“Shirkan waxaan u qabanaynaa si aan horumar u sameyno, sidoo kale wuxuu macno u sameynayaa dunida inteeda kale. Inkastoo dhibaatooyinku qoto dheer yihiin wax ka qabadkooduna dhib badan yahay – haddana waxaa muuqda astaamo ay ka mid tahay horumarka ay AMISOM ka sameysay Muqdisho,” ayuu yiri Cameron.
Ra’iisul wasaaraha Britain wuxuu sidoo kale sheegay in Al-shabaab oo ahayd mid aad wax u burburinaysa ay haatan dib u guranayaan, sidaa daraadeed waxay ila tahay buu yiri in iyadoo la eegayo sababahaas oo dhan ay jirto rajo ah lagu dejin karo qaab wanaagsan oo dhibaatada looga bixi karo Soomaaliyana ay noqoto dowlad shaqeyn karta.
Su’aal ku saabansaynd rajada uu ka qabo in shir hal maalin laga yeesho Soomaaliya ay culeys ku yeelan karto xalaadda ka jirta Soomaaliya? ayuu kaga jawaabay inay la tahay in waxa shir uu qabto ay tahay in laga shaqeysiiyo maskaxda dadka, diiraddana la saaro in waxa la qabanayo ay noqdaan kuwo natiijo ay ka dhalato.
Mr. Cameron ayaa sheegay in qorshayaashoodu ay yihiin inay xaqiijiyaan in AMISOM si wanaagsan loo maal-geliyo lana qalabeeyo si ay wax wanaagsan u qabtaan, sidoo kalena xoogga la saaro la dagaalanka burcadbadeedda oo uu sheegay inay yihiin kuwo dhibaato ku hayaan dunida oo dhan.
Ra’iisul wasaaraha UK wuxuu sheegay in dowladdiisu ay go’aansatay inay ciidammo hubeysan saaraan maraakiibtooda si ay isaga difaacaan burcadbadeedda, taasna ay ku guuleysteen wuxuuna intaas ku daray inay doonayaan in shirkan ay ka xaqiijiyaan in burcadbadeedda la qabto lana maxkamadeeyo.
Sidoo kale, mar uu ka hadlay go’aanka Al-shabaab ay ku sheegtay inay Al-Qaacida la midowday ayuu sheegay inay tahay arrin khatar ah, wuxuuna dhallinyarada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan inay ka mid noqdaan urur argagaxiso oo caalami ah ayna ka shaqeeyaan sidii dalkooda ay dib ugu dhisi lahaayeen.
Waxaa sidoo kale la weydiiyay su’aal ahayd: Somaliland waxay kasoo qaybgalaysaa shirka London waxayna raadinaysaa madaxbannaani diyaar ma u tahay inaad u ogolaato madax-bannaani?
“Taasi ma ahan waxa shirkan ku saabsan yahay – aad ayaanan u jeclaysanayaa horumarka Somaliland ay ka sameysay dhismaha dhaqaalaha, bulshada iyo meel marinta qaar ka mid ah qodobbada dowladnimo ee dal looga baahan yahay, waxayna ila tahay in taas la jeclayso, laakiin shirkani kuma saabsanaya aqoonsasho Somaliland mana ahan qorshaha Britain. Qorshaha Britain waa in xiriir wanaagsan oo toosan uu kala dhexeeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaalida.”
Jaaliyadda Soomaalida ee Birtain oo tiradoodu tahay 200,000 oo qof ayuu sheegay ra’iisul wasaaruhu sheegay inay wax weyn ku kordhiyeen dalkiisa, isagoo sheegay inay la tahay inay door-weyn ku leeyihiin mustaqbalka Soomaaliya, wuxuu sabab uga dhigay inay dunida oo dhan ka sameeyeen xawaalado taasoo uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya ay ka dhigeen mid iskiis u socda. Wuxuu xusay inay la shaqeynayaan Soomaalida dibadaha jooga oo uu sheegay inay saameyn ku leeyihiin siyaasadaha ka socda gudaha dalkooda.
Su’aal ahayd inuu booqanayo Soomaaliya iyo in kale, ayaa wuxuu sheegay inaysan qorshaha ugu jirin inuu booqdo Somaaliya, isagoo xusay inay ka go’an tahay inay u horkacaan caalamka wax ka qabashada Soomaaliya, wuxuuna sheegay in wasiirka arrimaha dibadda iyo kuwo kale ay booqdeen Muqdisho.
Ugu dambeyn, waxaa la weydiiyay inuu taageero ka haystaan dowladaha gobolka ee arrimaha Soomaaliya ku dhex-jiray waqtiga dheer, wuxuu sheegay inay taageero ka haystaan, isagoo xusay inuu kulammo la yeeshay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxda Tanzania, Kenya iyo kuwo kale, isagoo ku baaqay in arrinta muhiimka ah ay tahay in dunida oo dhan ay diiradda saaro sidii arrimaha Soomaaliya xal loogu heli lahaa.